စီးပွားရေးတင်ပြချက်များအတွက် web 2.0 | Martech Zone
တနင်္လာနေ့မတ်လ 17, 2008 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 Douglas Karr
ငါရုံနဲ့ငါ့တင်ပြချက်မျှဝေချင်တယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်သူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများတွင်ဘလော့ဂ်များနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမည်သို့နေရာချထားနိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်ရှာဖွေနေကြသည့်ကောင်းမွန်သောဒေသခံကုမ္ပဏီအချို့ရှိသည်။ ဒီမှာတင်ဆက်မှုမှာသိပ်မများလှပါ - အများစုကဆိုဒ်များနှင့်တင်ဆက်မှုများအကြားအပြန်အလှန်လှန်လှောကြည့်ခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်ပြောနေတာပါ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့သော Powerpoint / Keynote အကြောင်းအရာအသစ်ဖြစ်သည်။
Tags: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြောရမှာPowerPointတင်ဆက်မှုချွန်ထက်သောစိတ်slideshareဝဘ် 2.0စီးပွားရေးအတွက် web 2.0
Geocentric စျေးကွက်၏ Hubris
မတ်လ 18, 2008 မှာ 6: 03 AM
ပထမဆုံးဆလိုက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် web 2.0 effect ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သောစကားလုံးများနှင့်“ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း” စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
အခြားဆလိုက်များတွင်စာသားအလွန်များလွန်းသည်။ နမ်း။ သင့်ပရိသတ်ကိုသင့်ရဲ့စကားကိုနားထောင်စေချင်တယ်၊ ရိုးရှင်းသော့ချက်စကားလုံးများကိုဖြစ်ပါတယ်။
“ History” ဆလိုက်တွင်ကဲ့သို့ပင် web 1.0 ကိုကိုယ်စားပြုသည့်သာမာန်ပုံရိပ်တစ်ခုသာထားရှိပြီး web 2.0 ကိုကိုယ်စားပြုသောဆလိုက်အသစ်တစ်ခုကိုသာပြုလုပ်ပါ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆလိုက်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲစကားလုံးဖြင့်ရှင်းပြသည်။
မတ်လ 18, 2008 မှာ 8: 27 AM
အကြံကောင်းကောင်းမာတင်! လူတွေဟာပုံရိပ်တွေကိုစကားလုံးတွေထက်အများကြီးပိုမှတ်မိကြတာကိုငါသိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ပုံလွှာတွေနောက်မှာရှိဖို့သေချာအောင်ဒီတင်ဆက်မှုကိုငါပြင်ဆင်လိုက်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!
မတ်လ 18, 2008 မှာ 8: 42 AM
slideshare ကသင့်တင်ဆက်မှုကိုအသံထည့်သွင်းနိုင်တယ်။ ကောင်းတယ်။
လူအများစုက podcasts တွေကိုဖမ်းယူဖို့ iTunes ကိုအသုံးပြုကြတယ်။ သငျသညျကိုလည်း Am Enhanced Poldcast အဖြစ်ဖြန့်ဝေနိုင်ဘူး။
မတ်လ 18, 2008 မှာ 8: 30 AM
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောမှတ်စုတစ်ခု - Slideshare တွင် cache ယန္တရားတစ်ခုရှိသည်။ တခါတရံမှာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးဗားရှင်းပေါ်လာတယ်၊ နောက်တစ်ခါဒုတိယပုံစံပြန်ပေါ်လာတယ်။ ငါ 'updates' ကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အစား '' ဗားရှင်း '' စတင်ရန်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။